ရခိုင် ကလွဲ ကျန်လူ လူ မဟုတ်ထင် တဲ့ တရိစ္ဆာန် စရိုက် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး သန်းရွှေ
မြန်မာ့အရေး လေ့လာသူ Larry Jagan နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း »
ရခိုင် ကလွဲ ကျန်လူ လူ မဟုတ်ထင် တဲ့ တရိစ္ဆာန် စရိုက်
ANOTHER KHWE THAR STUPID RAKHINE…came and bark again…
Adipati Eyes‘s status. Soe Thu Moe
မျိုးချစ်ရခိုင် born from Kalar and ရခိုင်အမျိုးသားx bornn from Rohingya. esp kyawkyawnaing618@gmail.com father is Kalar and step father is Rohingya his IP address is 122.248.100.209 I chased this Mi Ma Sit Pha Ma Sit from here but keep on coming shamelessly…shoo shoo..go away.
ဘာ။။ ရခိုင်တွေပြော နေတာ ဘင်္ဂလီတဲ့ ။။ ဟုတ် ပြီ မင်း တို့ ပြော ဘင်္ဂလီကို ဘာ ဖြစ် လို့ ဘန်ကီမွန်း ခေါ် သွား ပါ ဟို လူ လာ ခေါ် ပါ ဒီစကား လောက်ဘဲ တတ်တာ လား ဘင်္ဂလီလို့ ပြော သေး တယ် ဘန်ကီမွန်း ကိုး ရီယား နဲ့ ဘာ ဆိုင် လဲ ကွာ တခြား စီဘဲ ငါးစိမ်း သည်မအဆင့် ရှိတဲ့ မင်းတို့ အတွေး မင်း တိုရဲ့အတ္တ ၊ မင်တိုရဲ့ စရိုက် က ရခိုင် ကလွဲ ကျန်လူ လူ မဟုတ်ထင် တဲ့ တရိစ္ဆာန်အသိ နဲ့ အစွန်း ရောက် နေတော့ပြောတာ ဂွကျ ပါလား
ဘင်္ဂလီမှန်ယင် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ နိုင်ငံ ကို အကြောင်း ကြား ကု လသမ္မဂကို တင်ပြ ပြီတော့ သုံး ပွင့် ဆိုင် မတရား ခိုး ၀င် သူ ကို တရားမျှတစွာ ဖေါ် ထုတ် ပြီး တော့ ခိုး ၀င် တဲ့ ဘင်္ဂလီက ဘင်္ဂလား ဒေခ်ျ နိုင်ငံ နဲ့ ဘဲ ဆိုင်တော့ မှာ လေ အဲဒီတော့ ဟို လူ လာ ခေါ် ပါ ဒီလူ လာ ခေါ် ပါ မတရား သဖြင့် လူလူ ချင်း မလုပ် ဖို့ ဘန်ကီပြော တာ နဲ့ ငါး စိမ်း သည် လို ရန်တွေ့ တတ်တဲ့ မင်း တို့ စရိုက် ကမင်း တု့ ရဲ့ စိတ်ကို ဖေါ် ပြနေလေပြီး လုပ် လုပ်လေကွာ ရခိုင်တွေ ၀ါဒ ဖြန့် တာ မှန်ယင် လုပ် ပြလေကွာ မင်း တု့ ကို အုပ် ချုပ်နေတဲ့ သမ္မတ ကလဲ ခိုး ၀င်သူ မရှိသလောက် ဘဲ လို့ တိုင်း သိပြည် သိ ပြောထား တာ လေ ပြီတော့ ရှိသေး တယ် နယ် မြေ လု တာ တဲ့ ဟုတ်လား ရခိုင် ပြည် နယ် မြို့ နယ် များ စွာ မှာ မြို့ အလယ် မူ ဆလင် ရပ် ကွက် မြို့ ဆင် ခြေ ဖုံး မူ ဆလင် ရပ်ကွက်တွေ တချို့ နှစ် ၂၀၀ နီး ပါး ရှိတော့ မဲ့ ဗလီတွေ ကို မီး ရှို့ စက်ယန်န္တယာား နဲ့ ဖြို ဖျက် သမိုင်း ဖျက် ဖို့ လုပ်နေတာ ဘယ်သူ တွေ လဲ ကို ရခိုင်တွေ ပြီတော့ အိမ်ဂရမ်ရှိတဲ့ မူ ဆလင် အိမ်တွေ ဆိုင်တွေ လိုင် စင် ရှိ ကား တွေ မီး ရှု့ တာ မြို့ ပေါါ် မူဆလင် ရပ် ကွက် တွေ ကို ပြာ ဖြစ် အောင် လုပ်ပြီး လူ တွေ ကို ဒု က္ခ သည် စခန်း မှာ ပိတ်လောင် ထား တာ ဘယ်သူ လဲ နယ် လု တာ ဘယ်သူ ပါလိမ့် ကလ၀ီဘတ် နောက်ပိုး တက်တဲ့ တနေ့ မင်း တို့ အတွက် ရှိကို ရှိလာ ပါလိမ့် မယ် ပြီး တော့ ရခိုင် ဘု ရင် လက်ထက်တည်း ကရခိုင် ပြည် မှာ မူ ဆလင် ရှိလို့ ရခိုင် ဘု ရင်တွေ မူ ဆလင် ဘွဲ့ ပါ တွဲ ပြီး ခံ ယူ ခဲ့ တာ မဟုတ်လား ဥပမာ ကွာ။။ မင်း ခရီ (၁၄၃၄-၁၄၅၉) က အာ လီခန်း အဖြစ်၎င်း။။။။ဘစော ဖြူမင်း (၁၄၅၉-၁၄၈၂)ကကလီမား ရှား အဖြစ်၎င်း။။။မင်း ဘာ ကြီး (၁၅၃၁-၁၅၅၃)ကဇောက် ဘောက် ရှား အဖြစ် ၄င်း အီစ္စလာမ်ဘွဲ့တွေ ခံယူ ခဲ့ တာ ။။။။အခု မှ ကု လား ကင် ရှင်း တဲ့ မင်း တို့ အဖြစ် က ရီစရာ။။။။။။ သမိုင်း ဖျေက် ချင်တာ ဘယ် သူ လဲ သမိုင်း မှာ မင်း တို့ ရခိုင် တွေ ဆိုး အား ကြီး လို့ မြန်မာ ဘု ရင်တွေ လူ မျိုး ပါ အပြုတ် တိုက် ခဲ့တာ ရခိုင် သမိုင်း မှာ မင်တို့ တိုး တိုး တိတ် တိတ် အမြဲ ပြော ကြတာ လေ ခလေး ကအစ မိုး ပေါ် မြောက် ပြီး အောက်က ဓါး ထောင်ပြီသတ်တယ် ဆို တာ မင်း တို့ ပြည်ပ ရခိုင်လှုပ် ရှား ဂျာ နယ်တွေမှာ လဲ ရှိတယ် လေ အဲဒီတုန်း က မင်းတို့ မုန်း တဲ့ ကု လား ကကယ် ခဲ့ လို့ ဘဂ်လား ဒေခ်ျ မှာ မင်း တို့ ဘိုး ဘင် တွေ ကို ခို လုံ ခွင့် အကာ ကွယ် ပေး ခဲ့ လို့ စစ် ကူ ပေး ခဲ့ လို့  မင်းအခု ရခိုင် ပြည်မှာ ရော ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ မှာ ရခိုင်တွေ မျက် နှာ သစ်ဖို့ မျက် နှာ ရှိနေတာ မှတ် အဒီလို သာ ကု လား မကယ်ခဲ့ ယင် ဧရာ မ လူ မျိုး ကြီး ရခိုင် ဆို တာ ဒီနေ့ စကား ပြော စရာ ပါး စပ် မရှိဘဲ ဖြစ်နေပါလိမ့် မယ်ပြီတော့ ရှိပါသေး တယ် မြွေ ပွေး နဲ့ ဘာ ဆို လဲ အို ငါ လဲ မသိပါ ဘူး ငါ ပြော တာ မဟုတ်ဘူး နော် ရှေ့ ဆို ရိုး စကား ပါ ငါမင်း တု့ နာ ချင် လို့ မဟုတ် ငါ လိမ်လည် မရေးတာ ကို မြင်စေ ချင် လို့ ။။။။ပြီး တော့ ကု လား မနိုင် ရခိုင် မဲ ဆုတာ လဲ ဗမာ စကား ပုံ မှာ ရှိပါသေး ငါရေး တာ သက် သေအြထောက် ထား ပြချင်လို့ ပါ
ကောင်း သော ရခိုင် များ ကို လုံး ၀ (လုံး ၀) မရည် ရွယ် ပါ
This entry was posted on July 26, 2013 at 7:50 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
5 Responses to “ရခိုင် ကလွဲ ကျန်လူ လူ မဟုတ်ထင် တဲ့ တရိစ္ဆာန် စရိုက်”
thura Says:	October 4, 2013 at 7:26 am | Reply ဒီလို အမှန်​တရား​တွေကိုအမြဲ​ရေး​ပေး​စေချင်​ပါတယ်​ ​သြော်​ ​ပြောရဦးမယ်​ စကားပုံတစ်​ခု​လေ ​မေ့​နေမှာစိုးလို့ ရခိုင်​နဲ့​မြွေ​ပွေးရခိုင်​ကိုအရင်​သတ်​တဲ့ ဟဲဟဲဟဲ………
drkokogyi Says:	September 15, 2014 at 9:58 am | Reply ခွေကုလား (Don’t call your God like that)
103.25.13.7 and many Khwe Rakhine…Shoo….Shooo. Go and eat shit in other place…Don’t come and bark here….
drkokogyi Says:	September 18, 2014 at 10:18 am | Reply Another PROSTITUTE’S SON wrote vulgar comments:
KHWE THAR မျိုးချစ်ရခိုင်
ရခိုင်အမျိုးသားx SOB Kyaw Kyaw Naing
drkokogyi Says:	September 19, 2014 at 8:13 am | Reply KHWE THAR RAKHINES Go away….I don’t want your sister also Shoo Shoo…
drkokogyi Says:	September 24, 2014 at 1:28 pm | Reply မျိုးချစ်ရခိုင် born from Kalar
and ရခိုင်အမျိုးသားx bornn from Rohingya. esp kyawkyawnaing618@gmail.com father is Kalar and step father is Rohingya his IP address is 122.248.100.209 I chased this Mi Ma Sit Pha Ma Sit from here but keep on coming shamelessly…shoo shoo..go away.